सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं, जेठ १३ print
२०७२ सालको ख्यातिप्राप्त फिल्म ‘पशुपतिप्रसाद’ टोलीको अर्को फिल्म ‘धनपति’को टे«लर सार्वजनिक भएको छ। शुक्रबार राजधानीमा कार्यक्रम राख्दै निर्माणपक्षले सार्वजनिक गरेको हो।
टुकी आर्ट्स र दीपेन्द्र के. खनाल प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्मित फिल्मको कथा खगेन्द्र लामिछानेले लेखेका हुन्। पशुपतिप्रसादबाट लेखन र अभिनयको प्रशंसा कमाएका उनै लामिछाने फिल्मको मुख्य चरित्र अर्थात् धनपति हुन्। दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित फिल्मले द्वन्द्वको चपेटामा परी पूर्वी तराईबाट काठमाडौं पसेको एक युवाको कथा भन्छ।
असार २३ गते रिलिज हुने फिल्ममा खगेन्द्रका अलावा लामिछाने, सुरक्षा पन्त, आशान्त शर्मा, मनिष निरौला, सुरभी बर्तौला, हरिहर शर्मा, रवि गिरी, कमल देवकोटा, प्रकाश घिमिरेलगायतले अभिनय गरेका छन्।
निर्देशक खनाल आफैंले खिचेको फिल्मलाई दीर्घ खड्काले सम्पादन गरेका छन्। फिल्ममा आधासुरको संगीत सुन्न सकिन्छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ १२, २०७४ १८:३५:४८